/Blog/Ithala/I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yeNoopept
ezaposwa ngomhla 09 / 16 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Isiza "Noopept", Esetyenziselwa ukuphucula imemori, yaphuhliswa kwi-1992 ngeqela lophando lweSayensi yePhando lwe-Pharmacology. I-Zakusov VV Yaye le nkunkuma ayibonakali kuphela eRashiya, kodwa nakwi-US, apho yayinelungelo lobunikazi emva kweminyaka emithathu, emva kokubhaliswa ekhaya. Ukutshintshwa kwamalungelo okuthengisa kunye nenani lezohlengahlengiso zorhwebo alunakuchaphazela ukuthandwa kwesilwanyana. Iminyaka engamashumi amabini emva kokuveliswa kweNoopept, ukuthengiswa kwayo kwaqikelelwa kwi-6.2 yezigidi ngonyaka.
"I-Noopept" ihluke kwezinye izidakamizwa ze-nootropic, nazo zifakwe kweli qela, ngoxa liye lachaphazela zonke izigaba zenkqubo yememori:
• Ukuqaliswa kokuqala kolwazi olungenayo,
• ukugcinwa kwexesha elide,
• Ukufumana ulwazi ngexesha elifanelekileyo.
Ukuqwalaselwa kwindlela yokusebenza kwezidakamizwa ze-nootropic ngokubanzi kwaye "i-Noopept" ngokukhethekileyo iya kunceda ukulungisa ukuthelekiswa kweziyobisi
kunye nabanye abameli be nootropic Iqela.
I-10 mg ye-N-phylalacetyl-L-prolylglycine ethyl ester ifakwa kwi-systemic stream engaguqukanga kwindlela yamathumbu kwaye emva koko, ukulwa ne-blood-brain barrier, ingena kwingqondo, apho, emva kwemizuzu eyi-15, ifunyanwa ngaphezulu , kunye neziphumo. Ubomi bemizuzu engama-halma ukusuka kwi-plasma yegazi livela kwiiyure ze-0.38. I-substance inxalenye ye-metabolized, ngexesha apho i-phenylacetic acid, i-cycloprolylglycine kunye ne-phenylacetylproline yenziwe. Ukufumaneka kwe-Bioavailability kugqitywe kwinqanaba le-99.7%.
Iingubo ze-Noopept powder
I-Noopept isetyenziswe kwonyango yokuphazamiseka kwengqalelo, ukulahleka kwememori, kunye neminye imisebenzi yokuqonda okanye ukukhathazeka ngokwemvakalelo evelele kwi-post-community syndrome, izifo ezibangelwa yi-asthenic, ukungafihleki kwe-vascular cerebral, ukukhathazeka kwengqondo kunye neemeko zengqondo ezinciphisa ubunzima beengqondo.
I pilisi "Noopept" ithathwa emva kokutya. Kwi-dose yokuqala ye-20 mg ihlukaniswe ngamanyathelo amabini (kusasa nakusihlwa), ngokungazimeli kakuhle nokunyamezeleka, ungaya kwi-30 mg (kathathu ngosuku nge-10 mg), ukubala ukuze ukufumana okokugqibela kungekudala Iiyure ze18. Ikhosi enye iphuma kwi-1.5 ukuya kwiinyanga ze-3, kwaye ikhosi yesibili inokuqhutywa ngekhefu leenyanga enye.
Iimpembelelo zeeNoopept kunye nezichaso
Phantse konke nootropics powder kuthetha ukuthintela ukusetyenziswa kwabasetyhini ngexesha lokukhulelwa. Nangona kunjalo, ukwamkelwa kwe "Noopept" kwoluhlu lweengqinisiso kufakiwe:
• ukuthintela iminyaka yobudala kwi-18 iminyaka,
• ukusilela kwe-lactase,
• ukuphawulwa kwamathambo kunye nezintso,
• i-lucose-galactose malabsorption,
Into yokugqibela ehambelanayo ne-pathological response to lactose (ubisi) phakathi kwamaSlav asempuma ijongwa kwi-16-18% yabemi. EYurophu, lo ngumlinganiselo wesilinganiso-ngaphezulu kwi-Austrian (ukuya kwi-20%), i-Finns (i-18%), ama-Itali (kuxhomekeke kummandla ukusuka kwi-15 ukuya ku-52%), i-Balkans kunye nabahlali baseKrete (56%). Ezantsi kweFransi, eli nani lifikelela kwi-67%, kwaye eSicily - 71%. Ipesenteji yokunyamezela kwe-lactose phakathi kwabemi base-Central Asia yi-80-oku kuthetha ukuba i-4 kubantu base-5 abakwazi ukusebenzisa le nkunkuma ye-nootropic. Kulo mzekelo, kuyona nto ibaluleke kakhulu ukutshintshela kwezinye iindlela zendalo zonyango ezinefuthe elifanayo le-nootropic (umzekelo, "HeadBooster"), kodwa kunye nokufumana "i-Noopept", kuyimfuneko ukuba ithathe ingqalelo kwi-hypersensitivity kumacandelo .
Imiphumo emibi ye "Noopept" ibandakanya ukuphendula okuthe tye kunye nokunyuswa kwengcinezelo yegazi kubantu abanexinzelelo lwegazi.
Impendulo "ye-nootropian" malunga nesenzo se "Noopept" kunye neempawu zendalo
Abantu abasebenzisa iziyobisi ze-nootropic ngenjongo yezonyango, kodwa ukwandisa imemori kwaye bavuselele umsebenzi wengqondo ("nootropics"), Ngokuqhelekileyo bafumana impembelelo yezinto ezihlukeneyo kwaye banokwenza ukuhlolwa okuzithelekisayo.
Ngoko, "i-Noopept" ichazwa njengesiza, esele seveki yesibini yokumkela ikuvumela ukuba uqhubeke nokwandisa umsebenzi wengqondo yonke imini. Kuphawulwe ukuba akukho zikhwebu eziqhelekileyo zenzeke ngomthwalo ofanayo, ukuba isilwanyana asithathwa ixesha elide. Ukukhankanywa okuhlukeneyo kwamaphupha, okokuba xa ufumana le nootropy ibe yinto ecacileyo kwaye icacisayo.
Iimpawu ezifanayo malunga nenkcazo yokuzimela, umzekelo, iSemax, i-Optimentis (Optimumis), i-HeadBooster (i-HeadBuster), njl., Kodwa akubona onke amalungiselelo achazwe ngendlela efanayo. Ngokomzekelo, "Fenibut", esetyenziselwa ukuqinisa imemori kunye nokunyamekela, ukunciphisa ukwesaba, kwangexesha elilodwa kwenza umntu akhathazekanga ngeempendulo.
I-Noopept powder Contraintecations
I-Noopept ayinikezelwa kwizigulane ezinobungozi obunzima bomzimba, ubunzima besibindi, ukungabikho kwe-lactose, i-glucose-galactose malabsorption okanye ukunyanzeliswa kwe-lactose. Ukongezelela, kuyimfuneko ukuyeka ukucacisa izilwanyana kwi-pregnancy, ukucheka, kunye nezigulane ezingaphantsi kwe-18 kunye nezigulane ezineengxenye ze-hypersensitivity zezilwanyana.
Isicelo sokukhulelwa kunye nokulahlwa
Umyalelo wesigxina se-Hoenopt ekunceliseni abantwana kunye nabasetyhini abakhulelweyo ayinqweneleka kakhulu, kuba akukho naluphi ulwazi oluthembekileyo malunga neempembelelo zengxaki yokuphuhliswa kwe-fetus okanye intsana ebelethwe ngabasetyhini abafumana unyango kunye neziyobisi.
Ithemba lusetyenziselwa ukulawulwa komlomo. Amacwecwe kufuneka athathwe emva kokutya aze atye ininzi yamanzi. Ngokumalunga nenyaniso yokuba isichengisi sinomphumo othakazelisayo, kufuneka kuthathwe ngaphandle kwe18: 00. Ubude bonyango kunye neli dose lonyango ugqirha ubala ngokuzimela.
Ekuqaleni kokonyango, isigulane sinconywa ukuba sithathe i-10 mg yesilwanyana ngamaxesha e-2 ngosuku. Ukuba, xa uthatha isicatshulwa kwizilwanyana ezincinane, kwakungenakwenzeka ukufezekisa umphumo wonyango ofunekayo, ukuvama kwamajelo kwanda kathathu ngosuku.
Isilwayo senzelwe ukusetyenziswa kwexesha elide, inkqubo yokonyango ingahluka kwi-1.5 ukuya kwiinyanga ze-3. Kunokwenzeka ukuqhuba iikhosi eziphindaphindiweyo zonyango iintsuku ezingamashumi amathathu emva kokungenwa kweziyobisi zokugqibela.
Ukuba ubuhlungu bufunekayo ukuba kuthathe i-Noopept kumayeza aphakamileyo ixesha elide, ngoko isiguli kufuneka sibe phantsi kokuqwalaselwa rhoqo kwezokwelapha.
I-Noopept powder Overdose
Ngaphandle kokufumana i-Noopept kumayeza aphezulu, izigulane aziyi kuveza iimpawu zetyhefu. Nangona kungenayo inetyhefu yesilwanyana, ukuba uyaphawula ukuba isigulane sengozi sithathe iilisi kwisilinganiso esiphezulu, kufuneka sihluthe isisu kwaye siqinisekise ukuveliswa kwekhabhoni kunye nokusela okukhulu.
Iimpuphu zeNoopept Imiphumo emibi
I-Noopept iyakunyamezela. Ngethuba lokunyanga, izigulane zenza umfutho wegazi ophezulu kunye neempendulo ezahlukeneyo.
Ukuba, xa usebenzisa i-Noopept, isigulane sinezibonakaliso ezingenasiphakamiso zonyango, zimele zixelelwe ngokukhawuleza kwicandelo logqirha oza kugqiba isigqibo sokufumana unyango olungaphezulu.
I-Noopept powder Imibandela kunye nemeko yokugcina
I-Noopept kufuneka igcinwe kwindawo eyomileyo, ikhuselwe kwindawo yokukhanya, engenakufikeleleka kubantwana. Ubungakanani bokugcinwa kwe-Hoenopt i-3 iminyaka.
I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yaseBromantane	I-7 Best Nootropics (SmartDrugs) kwimarike yeSunifiram